Hotels na Brussels | Akụkọ Njem
Hotelslọ nkwari akụ Brussels
Mariela Carril | | ulo, Brussels
Taa, ohere nke ebe obibi. Na họtel ndị mara mma, agbakwunyela ngwa na-enye ohere ịgbazite ụlọ ma ọ bụ ụlọ obibi ma ọ bụ ụlọ ma ọ bụ ịchọta ebe obibi mgbe ị na-elekọta anụ ụlọ. Ma onwere ndị anaghị ajụ nkwari akụ a ghaghi ikwu na taa otutu n'ime ha emeela ka onyinye ha na uzo ha di nma.
Iche echiche mgbe ahụ banyere ụdị na-elegharaghị ọnụahịa anya taa anyị ga-etinye uche na hotels na Brussels.
O yiri ka Ahịa dị n'obodo a ga-achọ ma ya mere, n'ezie, mgbe ọ bụla gọọmentị nke European Union nọ na nnọkọ, ọnụahịa ndị a na-ebili. Yabụ, ọ bụghị echiche ọjọọ ịbanye na saịtị nchọta maka ebe obibi ka ịlele anya na enye ma ghara ịhapụ ohere ịnọ n'otu n'ime ụlọ nkwari akụ ndị anyị na-eweta n'okpuru.
Ọ bụrụ n ’ile ọbịa ndị America na-amasị gị mgbe ahụ otu nhọrọ bụ Alolọ nkwari akụ Aloft Brussels Schuman. O nwere uzo okomoko, nlebara anya nke oma, ya na saa mbara, ulo ejikere nke oma ma di nma. E nwere ọtụtụ agba, ọtụtụ arịa ụlọ ọgbara ọhụrụ, akwa ndị a na-ere dị ka nnukwu mma na nnukwu mmiri. E nwere ụlọ ezumike ebe enwere ụfọdụ ndụ abalị mana atụla anya ihe dị ukwuu n'ihe oriri.
Hotellọ nkwari akụ a dị nso na Ebe Schuman, nke dị anya site na obi ochie na nke akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ, mana ọ bụrụ na ịchọghị ebe mara mma, ụlọ nkwari akụ a na-eme ebe dị anya ezigbo ahịa na ngwụsị izu.
MAS obibi Ọ bụ ụlọ nkwari akụ nke dị n'etiti European Quarter na etiti Brussels. Ọ bụrụ n ’ije ije nkeji iri abụọ ị ga - abata na katidral ma ọ bụ Royal Museums of Fine Arts. Ọ dị mgbagwoju anya nke ụlọ, atọ, nke malitere na mmalite narị afọ nke iri abụọ ma jiri ụdị ya rụzigharịa ya. Ọ bụ ya mere ị ga-eji hụ ala osisi siri ike, ọkụ ọkụ na-agba osisi, uko ụlọ, na nkọwa ndị ọzọ oge.
Offerslọ nkwari akụ ahụ na-enye ụlọ na ime ụlọ ọkara n’ime ha na-elegharị anya n’okporo ámá ebe ọkara nke ọzọ na-eleba anya n’ubi ndị dị n’azụ. Imirikiti nwere ntụ oyi, enwere igwe mbugo na ị na-akwụ ụgwọ maka ị na-adọba ụgbọala gburugburu 18 euro ụbọchị. Enwere Ngwunye 25 baptism na aha ndi agba egwu (rumba, twist, wdg).
Enwere oke ime ụlọ na ulo na ime ụlọ na kichinetị, nke bụ isi, yana kwa, maka ọnụ ahịa dị elu, e nwere ụlọ dị iche iche nwere obere ogige na ime ụlọ ihi ụra abụọ. Ugboro abụọ nwere ọnụahịa site na euro 78 n'oge dị ala. A na-akwụ nri ụtụtụ iche iche, euro 15, mana WiFi bụ n'efu.
Nhọrọ ọzọ ma a bịa na họtel na Brussels bụ Lọ nkwari akụ, ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe, otu ikuku uzuoku uzuoku, Anyị nwere ike ikwu. Ihe niile gbara gburugburu foto, ya mere aha ya. Ọ bụ n'ebe ndịda nke etiti obodo ahụ, na ókè-ala n'etiti mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke Saint Gilles na Ixelles. Nwere ike iji ụkwụ site na nkwari akụ gaa Nnukwu Ebe, obi obodo ahụ, na-erughị ọkara elekere nke ịga ije.
Emeputara mbugharị na-acha uhie uhie, odo, sepia, oji na ọcha. Na-arụ ọrụ na ụlọ abụọ ochie ejirila rụọ ọrụ. Ọrụ nnabata ahụ na-arụ ọrụ elekere 24, enwere igwe mbuli elu atọ yana yana mpụga mpụga nwere tebụl na oche. E nwere ngụkọta nke Roomslọ iri isii na asaa Dị nnọọ mma, chọọ ya mma na foto nke Brussels. Ha niile nwere televishọn, nchekwa na tebụl na ụfọdụ na-enye tii na kọfị.
Enwere ụlọ buru ibu, XL, nke nwere ihe ndina sofa, menu ohiri isi, ime ụlọ ịwụ ahụ na taịlị ụgbọ oloko na ọrụ nri ụtụtụ dị obere na obere ihe niile, n'oge ọkọchị, enwere ike iwere na mbara ala. Ogwe kwesịrị ka a gara dị ka o nwere menu nke 50 ndị Belgium na ụdị chocolate dị iche iche. Ugboro abụọ nwere ụgwọ site na euro 65 n'oge dị ala.
Stylọ nkwari akụ ọzọ bụ Zụọnụ Hotellọ nkwari akụ. Maka ndị nzuzu banyere ụgbọ oloko ọ dị mma n'ihi na teres na elele n'okporo ụzọ enwere abụọ gwongworo ochie. Otu n'ime ha nwere ụlọ 15 dị ọnụ ala ma na-ekerịta ọnụ ụlọ (were ma ọ bụ gbazite akpa ụra na akwa nhicha ahụ), nke ọzọ nwere ụlọ pụrụ iche pụrụ iche nke nwere ụlọ ịsa ahụ na mbara ala nke ya. N'ụzọ doro anya, enwekwara ọnụ ụlọ ndị dị mma, nke oge a na nke na-agbanwe agbanwe nke ndị ọbịa, ndị di na nwunye ma ọ bụ ndị otu nwere ike iji.
Hotellọ nkwari akụ ahụ na-enye nri ụtụtụ na Train Bistro, nke na-enyekwa nri ehihie na nri abalị Wednesday site na Fraịde na brunch Saturday ruo Sunday. E nwekwara a mmanya na ebe ahụ, na Obodo Schaerbeek, e nwere ọtụtụ ụlọ nri. Roomslọ abụọ ahụ na-amalite na 60 euro.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị ka a Bed & Breakfast mgbe nhọrọ bụ ỌRUM. Ọ nwere naanị ụlọ isii, nke ọ bụla nwere mbinye aka nke onye nrụpụta na omenka oge a. Hotellọ nkwari akụ ahụ buru ibu nke ukwuu n'ihi na ọ bụ a ụlọ ochie site na 1840, mechara ghọọ ụlọ ọrụ ọkpọkọ. Ndị nwe ya dị nso na ndị ọbịa ha ma na-ahazi ihe ngosi ọla ma ọ bụ ihe omume nka na okpuru ulo.
Thelọ nkwari akụ ahụ dị n'okporo ámá dị jụụ, na agbata obi mara mma nke dị nso na canal Charleroi, na-adịghị anya na Boulevard de Barthèlèmy, n'okporo ámá na-eme mkpọtụ ma na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụrụ na enwere. Ọ bụrụ na ụlọ nkwari akụ a na-amasị gị, ịnwere ike ịdekọ ntanetị n'ịntanetị ị ga-enweta ozi zuru ezu na ime ụlọ ọ bụla. Enweghị TVEe, na isi ike nke ụlọ nkwari akụ ahụ bụ nke B&B, ya mere enwere oghere na oge. Ugboro abụọ nwere ọnụahịa site na euro 130 kwa afọ, nri ụtụtụ gụnyere na WiFi efu,
N'ikpeazụ, na ndepụta nke ụlọ oriri na nkwari akụ anyị na brussels taa, anyị na-akwụsị na ụlọ ndozi ndị ntorobịa. Ọ bụ Ihi ụra nke ọma YH, na nso ọdụ ụgbọ okporo ígwè Gare du Nord na nso ọdụ ụgbọ okporo ígwè Rogier na njem 10 nkeji site na Grand Place, ebe akụkọ ihe mere eme.
Youthlọ mbikọ a na-eto eto na-arụ ọrụ na a isii ụlọ ụlọ, ọgbara ọhụrụ na nkecha. Ihi ụra nke ọma bụ enweghị uru, nzukọ ndị ntorobịa kemgbe etiti afọ ndị 70. Ndị ọrụ ya nwere mmekọrịta enyi na enyi, ndị na-eto eto, agbaziri ịnyịnya ígwè, a na-enye ndị na-ejegharị n'efu na Brussels, enwere kọmpụta n'efu na ime ụlọ nwere igwe na-ehicha na draya. Mpaghara a na-ahụkarị gụnyere egwuregwu maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Hostlọ mbikọ ahụ nwere Ime ụlọ 37, ụfọdụ ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, ụmụ ejima na mmadụ isii na ihe iberibe akwa. Igwe kpakpando, otu, okpukpu abụọ na okpukpu atọ dịkwuo elu ma nwee nchekwa, friji na TV. Mgbe ahụ enwere ụlọ Duplex maka ezinụlọ ma ọ bụ otu dị iche iche nke mmadụ atọ ma ọ bụ anọ nwere terrace nkeonwe na ụfọdụ nwere obere kichin. Ime ụlọ niile nwere ime ụlọ ịwụ nke aka ha.
Ọnụego ya gụnyere akwa ma ọ bụghị akwa nhicha ahụ. Nri ụtụtụ dị mfe mana ọ dị mma. Enwere ụlọ mmanya, mana ebe ahụ dị mma nke na enwere ọtụtụ ebe gburugburu iri nri na ị drinkụ ihe ọ drinkụ .ụ. Ugboro abụọ nwere ụgwọ site na euro 69 na oge dị ala, nri ụtụtụ gụnyere.
N'ezie, Brussels nwere ọtụtụ ụlọ nkwari akụ na ụdị ebe obibi mana ị nwere ike ịmasị otu n'ime ndepụta anyị. Ezigbo njem!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Brussels » Hotelslọ nkwari akụ Brussels
Okirikiri ala mara mma na Spain
Mba kacha nta n'ụwa